Oku isikolo endala European ayive iisilingi eliphezulu, nokufakwa iBrasserie, Iindonga ezenziwe, kunye nabalungiseleli abanxibe ngokusesikweni.
A coffee shop maza-aphefumlelweyo eParis into olufumanayo xa i Aussie kunye Frenchie ukuqala ivenkile yekofu, komnye wemizi cafe inkcubeko odumileyo ukhathazeka kakhulu ehlabathini. Kwenza phezulu kuluhlu lwe best iivenkile zethu coffee eYurophu.
Ngenxa lwezithuba ezifana Mok, Brussels ke abarhola spot yayo iivenkile best ikofu eYurophu map.
Bona akayibhulisi iimbotyi zabo coffee ngokwabo okungama kuyo ekubeni izinga eliphezulu.
Kuye elika Bekubonela coffee. It iepigenetics indawo kwi best iivenkile zethu ikofu kuluhlu eYurophu. Le ndawo ngumbiyozo izithethe ikofu kwaye igumbi ukungcamlisa kunye kwimo ubuciko Roastery. Cinga Willy Wonka idibana coffee.
e Edinburgh, i phisa Lab is on mkhuba kwaye yenye iivenkile best coffee eYurophu.
Nomla- Labs yokuvelela ukuba abantu yaze iingcango zazo ukuze. imenyu lwabo Ikofu womyoleli ukuba uthando lwabo.
Zibonisa ezine ejikelezayo coffees imvelaphi eyodwa. Ezimbini ziye eyayivutyelwa kwi bar lwabo asile kunye nezinye ezimbini kwi zabo espresso bar. ngababini Coffee ambongoze ikeyiki okanye namakhekhe, apho phisa Lab akanayo ukunqongophala.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Best zokudlela For The Best Coffee EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
cafe cafelover coffeeculture TravelBrussels TravelLondon TravelMilan travelparis UkuhambaVienna TravelZurich